Mogadishu Journal » 2019 » March » 2
Mjournal :-Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa ka hadlay madaafiic maanta ku soo dhacay Xarunta Wasaaradda oo ku dhow Xarunta Madaxtooyada. Wasiir Maareeye ayaa sheegay inuu jiro khasaare burbur oo soo gaaray mid ka mid ah...
Eng. Yariisow “Argagixisada waxay beegsadaan nafta iyo maalka Shacabka Soomaaliyeed”
Mjournal :-Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho C/raxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa ku eedeeyay Al-Shabaab inay beegsaneyso nafta iyo maalka shacabka Soomaaliyeed, kaddib markii weerar ku bilowday qaraxyo lagu qaaday Dhismayaal ku yaala Wadada Maka...
Puntland oo Xukuntay shan dhalinyaro ah oo geystay kufsi wadareed
Mjournal :-Maxkamadda Darajadda Koowaad ee gobolka Nugaal ee Puntland ayaa dil toogasha ah ku xukuntay 5 eedaysane oo loo haystay iney kufsi wadareed ka gaysteen Gaalkacyo. Ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Puntland Maxamed Xareed Faarax oo goor dhowayd jir jaraaid ku qabtay...
Madaafiic ku soo dhacday xarunta madaxtooyada Soomaaliya
Mjournal :-Tiro Madaafiic Hoobiyeyaal ah ayaa ku soo dhacay Xarunta Madaxtooyada Villa Soomaaliya, oo ay degan yihiin Madaxda dowladda iyo qaar ka mid ah Hey’adaha dowladda. Illaa 5 Hoobiye ayaa ku soo dhacay hareeraha iyo gudaha Madaxtooyada, waxaana saddex ka mid ah ay ku kala...
Hordhaca Kulanka Elclasico Real Madrid Vs Barcelona Miyay Real Mar Kale Aqbali Doonta Guul Daro
habeenkii Arbacadii Ernesto Valverde kooxdiisa ayaa 3-0 ku garaacday kooxda ka socota caasimada Spain ee Los Blancos semi finalka Copa del Rey. Guul kale oo ay ka gaarto Blaugrana isbuucaan ayaa waxa ay ka dhigi kartaa inay 12 dhibcood ka sar-mari doonan kooxda Santiago Bernabeu...
Mjournal :-Madaxtooyada Uganda ayaa qaban qaabineysa kulan fool ka fool ah oo ay isugu imanayaan Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya oo u dhexeeya xiisad diblumaasiyadeed oo ka dhalatay shirkii Shidaalka Soomaaliya ee magaalada London. Sarkaal ka tirsan Madaxtooyada dalka...
QM oo War ka soo saartay Qaraxyadii iyo Weeraradii Muqdisho
Mjournal :-Warsaxaafadeed kasoo baxay Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey ayaa si adag loogu Cambaareeyay Weeraradii Al-Shabaab ay ku qaadeen Magaalada Muqdisho, kuwaasoo ay ku dhinteen dad badan oo Shacab ah. Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay, Antonio Guterres, ayaa waxa uu ku...